पीसी को लागी सबै भन्दा राम्रो नि: शुल्क रिमोट कन्ट्रोल प्रोग्राम मोबाइल फोरम
रिमोट कन्ट्रोल डेस्कटप प्रोग्रामहरू सबै क्रोध हुन्। तिनीहरूले हामीलाई अन्य उपकरणहरू, जस्तै मोबाइल फोनबाट हाम्रो पीसीमा जडान गर्न अनुमति दिन्छ। यस पोष्टमा हामी तपाईंलाई देखाउँदै छौं पीसी निःशुल्क को लागी उत्तम रिमोट कन्ट्रोल प्रोग्रामहरु, नेटिभ सफ्टवेयरबाट जुन तेस्रो-पार्टी प्रोग्रामहरूमा हाम्रो प्रणालीमा आउँछ।
तपाईंलाई राम्ररी थाहा छ, एक पीसी टाढाबाट अन्य उपकरणहरू प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ केही रिमोट कन्ट्रोल प्रोग्रामहरू। यी कार्यक्रमहरूले पूर्ण पहुँचका लागि अनुमति दिन्छ र दुबैका लागि उद्देश्यले हो व्यावसायिक प्रयोग (प्रणाली प्रशासकहरू) साथै व्यक्तिगत प्रयोग।
हामी त्यस्तो समयमा छौं जब telecommuting यो धेरै कम्पनीहरूमा दिन को क्रम हो। तसर्थ, यस प्रकारको प्रोग्रामको प्रयोग भर्खरका महिनाहरूमा फैलिएको छ, किनकि उनीहरूले हामीलाई पीसी टाढैबाट नियन्त्रण गर्न अनुमति दिए। हामी तपाईंलाई देखाउन जाँदै छौं उत्तम नि: शुल्क पीसी रिमोट कन्ट्रोल प्रोग्रामहरू। तर पहिले, हेरौं रिमोट कन्ट्रोल प्रोग्राम के हो।
1 रिमोट कन्ट्रोल प्रोग्राम के हो र यो केको लागि हो?
2 पीसीको लागि उत्तम रिमोट कन्ट्रोल प्रोग्रामहरू
2.1 गुगल क्रोम रिमोट डेस्कटप
2.2 विन्डोज रिमोट डेस्कटप
2.3 कुनै पनि डेस्क
2.6 इपेरियस रिमोट
2.7 VNC जडान
2.8 एम्मी प्रशासन
रिमोट कन्ट्रोल प्रोग्राम के हो र यो केको लागि हो?
रिमोट कन्ट्रोल सफ्टवेयर वा पीसीको लागि उपकरणले हामीलाई नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ पूर्ण वा आंशिक एउटा टीम जुन हाम्रो होइन। यो मा गर्न सकिन्छ ईन्टरनेटमा वा स्थानीय नेटवर्कबाट। यस तरीकाले हामी फाईलहरू पहुँच गर्न, प्रोग्रामहरू वा ड्राइभरहरूको स्थापना वा स्थापना रद्द गर्न, प्रणाली कन्फिगरेसन परिमार्जन गर्न सक्दछौं र अधिक।
यस प्रकारको रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्रामहरू सर्वर / क्लाइन्ट टेक्नोलोजीमा आधारित हुन्छन्, सर्भर नियन्त्रण गरिएको पीसीमा चल्दछ, जसले बदलीमा टाढाको होस्टको रूपमा स्थापना गरिएको ग्राहकबाट निर्देशनहरू प्राप्त गर्दछ। तिनीहरू काम गर्छन् पृष्ठभूमिमा र सामान्यतया प्रयोगकर्ता प्राधिकरण पीसी को दूर पहुँच को अनुमति दिन को लागी।
यी उपकरणहरूले अनुमति दिन्छ रिमोट प्रयोगकर्ताहरू बीच रिमोट समर्थन, स्थानीय नेटवर्कमा मात्र होईन। यो व्यापक रूपमा कम्पनीहरूमा प्रयोग भएको छ जहाँ प्राविधिक समर्थन श्रमिकको पीसीमा टाढाको पहुँच अनुरोध गर्दछ टाढाबाट प्रणाली सेटिंग्स कन्फिगर गर्न, समस्या निवारण र मद्दत प्रदान गर्न।
हामीले तल उल्लेख गर्ने कार्यक्रमहरू डिजाइन गरिएको छ कडा सुरक्षा मापदण्ड अन्तर्गत हाम्रो फाईलहरू, डाटा, जानकारी र अन्यहरू चोरी हुन, प्रतिलिपि बनाउने र, अन्तमा, उल्लंघन हुनबाट रोक्नको लागि। तपाइँले तपाइँको कम्प्युटरमा दुबै पहुँच गर्न कहिल्यै अनुमति दिनु हुँदैन अज्ञात र अविश्वसनीय तेस्रो-पार्टी प्रोग्रामहरू.
पीसीको लागि उत्तम रिमोट कन्ट्रोल प्रोग्रामहरू
गुगल क्रोम रिमोट डेस्कटप
गुगलले हामीलाई पीसीको लागि गुगल क्रोमको साथ एक रिमोट कन्ट्रोल प्रोग्राम प्रदान गर्दछ। पक्कै पनि यो छ मुक्त। यस कार्यक्रमले हामीलाई पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ सम्पूर्ण कम्प्युटरकेवल क्रोम मात्र होईन। प्रोग्राम स्थापना गर्न, हामीले गर्नै पर्छ डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस् गुगल क्रोममा विस्तार। यो एक्स्टेन्सन होईन, तर क्रोमको लागि सानो अनुप्रयोग हो।
हामीसँग पनि छ मोबाइल अनुप्रयोगहरू फोन मार्फत हाम्रो पीसी जडान र नियन्त्रण गर्न Android o आईओएस। क्रोमको रिमोट डेस्कटप यस रूपमा देखा पर्छ सबै भन्दा राम्रो विकल्प मध्ये एक निम्न द्वारा:
यसले मोबाईल र ट्याब्लेटहरूको लागि हाम्रो गुगल खाता मार्फत विशेष अनुप्रयोगबाट जडान अनुमति दिन्छ।
ब्राउजर मात्र होईन, पूरै पीसीको दूर उपयोगको अनुमति दिन्छ।
कन्फिगरेसन सहज र सरल छ, साथै यसको ईन्टरफेस। उपकरणको यस प्रकारको एक उत्तम हो।
सुरक्षित जडानहरू सुनिश्चित गर्न तपाईंलाई पिन कोड प्रविष्ट गर्न अनुमति दिन्छ।
विन्डोज १० ले हामीलाई यसको आफ्नै प्रोग्राम प्रस्ताव गर्दछ दूर पहुँच हाम्रो डेस्कमा। अवश्य पनि, यसलाई प्रयोग गर्न हामीसँग इजाजतपत्र हुनुपर्दछ विन्डोज १० प्रो, गृह संस्करणले हामीलाई यो रिमोट कन्ट्रोल प्रकार्यमा पहुँच गर्न अनुमति दिँदैन।
यदि हामीसँग विन्डोज १० प्रो संस्करण छ र हामी चाहन्छौं रिमोट डेस्कटप सक्रिय गर्नुहोस्, हामीले निम्न गर्नु पर्छ:
प्रविष्ट गर्नुहोस् विन्डोज सेटिंग्स र क्लिक गर्नुहोस् प्रणाली मुख्य सेटिंग्स पहुँच गर्न।
बाँया स्तम्भमा हामीले विकल्प हेर्नु पर्छ रिमोट डेस्कटप।
विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस् र हामी सक्षम गर्दछौं।
कम्प्युटरमा जडान गर्न, हामीले तपाईंले प्रयोग गरेको नाम प्रयोग गर्नुपर्नेछ "यस कम्प्युटरमा कसरी जडान गर्ने" सेक्सन। जडान गर्न हामीले यसको प्रयोग गर्नुपर्दछ रिमोट डेस्कटप ग्राहक अनुप्रयोग, यदि तपाइँ एक प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ विन्डोज 10, Android, आईओएस o MacOS.
यो विकल्प सक्रिय गर्न महत्त्वपूर्ण छ «नेटवर्क-स्तर प्रमाणीकरण प्रयोग गर्नको लागि कम्प्युटरहरू आवश्यक छ»ताकि कोहीले पनि कम्प्युटरमा जडान गर्न सक्दैन। हामी यो विकल्प पाउनेछौं उन्नत सेटिंग्स।
माईक्रोसफ्टले हामीलाई पृष्ठ प्रदान गर्दछ विन्डोज रिमोट डेस्कटप प्रयोग गर्नका लागि निर्देशनहरू। यसलाई हेर्न, जानुहोस् यो लिङ्क.
कुनै पनि डेस्क
एनीडेस्क पूर्ण रूपमा अर्को प्रोग्राम हो free व्यक्तिगत प्रयोगको लागि जुन हामीलाई कम्प्युटरमा टाढाबाट विश्वको कुनै पनि स्थानबाट जडान गर्न अनुमति दिन्छ। यसको प्रयोग गर्न हामीसँग हुनुपर्दछ वाइफाइ जडान y ग्राहक स्थापित एक उपकरण, या त पीसी वा एन्ड्रोइड वा आईओएस मोबाइल। हामी सक्छौ निम्नलाई हाइलाइट गर्नुहोस् यस रिमोट कन्ट्रोल अनुप्रयोगबाट:
प्रयोग गर्न धेरै सजिलो र सहज कार्यक्रम।
तपाईंलाई टाढाबाट फाइलहरू पठाउन अनुमति दिँदछ।
धेरै तरल पदार्थ डाटा प्रसारण।
सुरक्षित र भरपर्दो जडानहरू।
नियन्त्रणहरू मोबाइल संस्करणको लागि अनुकूलित।
यसले हामीलाई एक पीसीबाट हाम्रो मोबाइल नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ (केवल केहि उपकरणहरूमा)।
मा उपलब्ध सबै अपरेटिंग प्रणालीहरू: Windows, MacOS, आईओएस, Android, लिनक्स, क्रोम ओएस y रास्पबेरी Pi.
TeamViewer एक कार्यक्रम हो free रिमोट कन्ट्रोल धेरै राम्रो इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरु बीच। यो दुबै व्यावसायिक प्रयोग (प्राविधिक समर्थन) र व्यक्तिगत प्रयोगको लागि मान्य कार्यक्रम हो। यो उपलब्ध छ सबै अपरेटिंग प्रणालीहरू, त्यसैले यो समर्पित अनुप्रयोगहरूको लागि Windows, MacOS, आईओएस, Android, लिनक्स, क्रोम ओएस y रास्पबेरी Pi.
अन्य पक्षहरू मध्ये, TeamViewer हामीलाई प्रदान गर्दछ निम्न कार्यहरू:
एकै समयमा एक भन्दा बढी पीसी नियन्त्रण गर्नुहोस्।
टोलीहरू बीच कुराकानी गर्न च्याट गर्नुहोस्।
कम्प्युटरहरू बीच फाईलहरू र कागजातहरू पठाउनुहोस्।
SupRemo अर्को उपकरण हो free व्यक्तिगत प्रयोगको लागि जसले हामीलाई पीसीको लागि रिमोट कन्ट्रोल स्थापना गर्न अनुमति दिन्छ। यो बहु प्लेटफार्म हो, यसका लागि अनुप्रयोगहरू छन् बिभिन्न अपरेटिंग प्रणाली: Windows, MacOS, आईओएस, एन्ड्रोइड। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण सुविधाहरू यस कार्यक्रम को निम्नलिखित छ:
सहज र अनुकूलन ईन्टरफेस।
यसको लागि हाम्रो पीसीमा कुनै कन्फिगरेशन आवश्यक पर्दैन, केवल स्थापना।
एल्गोरिदमसँग सुरक्षित र ईन्क्रिप्टेड कनेक्शन।
यसले बहु स्क्रिनहरू र एक साथ जडानहरूको साथ काम गर्न अनुमति दिन्छ।
जडित कम्प्युटरहरू बीच फाईलहरू र फोल्डरहरू स्थानान्तरण गर्नुहोस्।
इपेरियस रिमोट हाम्रो पीसीमा दूर पहुँच अनुप्रयोग हो जुन एक छ पेशेवर फ्रीवेयर मोड, त्यो हो, यो एक संस्करण हो freemium सीमित कार्यहरूका साथ तर यसले हामीलाई जे भए पनि सेवा गर्दछ। तसर्थ, हामी यो विकल्प सिफारिस गर्दछौं यदि हामी तपाईंलाई एक दिन गइरहेका छौं व्यावसायिक प्रयोग र हामी यसको लागि भुक्तानी गर्न मन पराउँदैनौं। यसको सबैभन्दा उल्लेखनीय सुविधाहरू हुन्:
नि: शुल्क संस्करणले एक पटकमा एक जडान मात्र अनुमति दिन्छ।
सशुल्क संस्करणसँग बहु-प्रयोगकर्ता च्याट छ।
समय रेखा उपलब्ध।
यसका लागि मोबाइल अनुप्रयोग छ Androideआईओएस हाम्रो पीसीमा दूर जडान स्थापना गर्न।
यस उपकरण दुबैमा धेरै शक्तिशाली छ नि: शुल्क संस्करण (गृह संस्करण) भुक्तानको रूपमा। थप रूपमा, यससँग यसको भुक्तान विधिहरूको लागि निःशुल्क परीक्षणहरू छन्। मा उपलब्ध छ कुनै अपरेटिंग प्रणाली र एन्ड्रोइड र आईओएस को लागी मोबाइल अनुप्रयोगहरु प्रदान गर्दछ। VNC जडानबाट हाइलाइटहरू:
बहु प्लेटफर्म पीसी रिमोट कन्ट्रोल उपकरण।
हाम्रो टोलीमा पहुँच गर्नका लागि तपाईंलाई अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई आमन्त्रण पठाउन अनुमति दिन्छ।
एउटा सुरक्षा प्रतिलिपि बनाउनुहोस्।
टाढाको ग्राहकहरूको पहुँच रोक्नुहोस् पहुँच भएको उपकरणको चोरीको कारणले अनावश्यक पहुँच रोक्न।
पासवर्ड सुरक्षित सत्रहरू।
यसको निःशुल्क संस्करणमा कार्यक्षमता सीमित छन्।
यो संग एक धेरै सरल र प्रयोग गर्न सजिलो दूर पहुँच उपकरण हो विशेषता / सीमितता के को प्रति महिना १ hours घण्टा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ एकल सत्रमा। त्यहाँ राम्रो कार्यक्रमहरू छन्, तर यो यस सूचीमा हुनु पनि योग्य छ। यसको विशिष्टताहरू मध्ये, हामी निम्न हाइलाइट गर्दछौं:
यो एक प्रकाश उपकरण हो, जहाँ स्थापना प्रक्रिया सरल छ र कार्यक्रमको वजन धेरै कम छ।
सामयिक प्रयोगको लागि उत्तम, यो न्यूनतम गर्दछ रूपमा: तपाइँको कम्प्युटर टाढा बाट नियन्त्रण।
कम्पनीहरूका लागि उपयुक्त र डाटा ट्रान्सफरमा उच्च स्तरको सुरक्षा।
यसले फाईल सेयर गर्न अनुमति दिदैन।
द्रुत इन्टरनेट जडान आवाश्यक छ।
यो एक रिमोट एक्सेस प्रोग्राम हो जसले साझेदारी स्क्रीन, फाईलहरू र रिमोट डेस्कटप प्रकार्यहरू गर्न सक्दछ। धेरै पूर्ण छ र यो सित्तैं हो। हामी यस शक्तिशाली उपकरण को लागी निम्नलिखित विशेषताहरु हाइलाइट गर्न सक्छौं:
द्रुत र सजिलो स्थापना र कन्फिगरेसन।
त्यहाँ ग्राहक सफ्टवेयर स्थापना गर्न आवश्यक छैन र विन्डोज डेस्कटपको रिमोट कन्ट्रोल कुनै पनि HTML5 ब्राउजरबाट गर्न सकिन्छ।
द्रुत र सजिलो फाइल स्थानान्तरण।
मोबाइल उपकरणहरूबाट पीसीमा पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ।
नकारात्मक पक्षमा, यसले अतिरिक्त कार्यहरूको सीमित संख्या प्रदान गर्दछ।
UltraVNC विन्डोज प्रयोगकर्ताहरूका लागि एक धेरै उपयुक्त उपकरण हो जसको लागि सफ्टवेयरको आवश्यकता हुन्छ खुला स्रोत र पूर्ण नि: शुल्क पीसी को रिमोट कन्ट्रोल स्थापना गर्न को लागी। थप रूपमा, यसले प्रस्ताव गर्दछ असंख्य विकल्पहरू र कार्यक्षमता जसको निम्नलाई हाइलाइट गर्नुपर्दछ:
सुरक्षित र विश्वसनीय रिमोट जडानहरू दर्शक (ग्राहक) र सर्भर (रिमोट कन्ट्रोल पीसी) बीच।
द्रुत र सजिलो डाटा प्रसारण।
तपाईंलाई पाठ सन्देशहरू साटासाट गर्न अनुमति दिँदछ।
सुरक्षाको मामलामा धेरै राम्रो छ: यसले प्रमाणीकरण विधिहरू (पासवर्ड) प्रदान गर्दछ।
इन्टरफेस पुरानो हो र धेरै सहज छैन।
स्प्लाशटप एक अर्को नि: शुल्क परीक्षण संस्करणको साथ ती उपकरणहरू प्रदान गर्दछ अधिक सीमित कार्यहरू। यद्यपि यो पीसीको लागि टाढाको डेस्कटप प्रोग्राम हो जुन यस सूचीमा निम्न उल्लेखनीय सुविधाहरूको लागि उल्लेखनीय छ:
उही स्थानीय नेटवर्क भित्र जडानलाई अनुमति दिन्छ।
यो एक बहु प्लेटफर्म उपकरण हो जुन सबै अपरेटि systems प्रणालीहरूसँग दुबै कम्प्युटर र एन्ड्रोइड र आईओएस मोबाईलहरूको अनुकूलता अनुमति दिन्छ।
यो अनुमति दिन्छ अडियो र भिडियो प्रसारण जडान भएका उपकरणहरू बीच, फाइल डाउनलोड नगरीकन उही स्थानीय नेटवर्कमा जडित अन्य उपकरणहरूबाट टाढाको सामग्री प्ले गर्न अनुमति दिदै।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » कार्यक्रमहरू » पीसीको लागि उत्तम निःशुल्क रिमोट कन्ट्रोल प्रोग्रामहरू